September 17, 2020 1445
जिल्ला प्रहरी’का इन्स्पेक्टर सन्तोष खड्काले घटनास्थलमा पीडितले जोगिन संघर्ष गर्दा धान मडारिएको, चुराहरू फुटेको पाइएको बताए । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको श’व परीक्ष’णको विस्तृत रिपोर्ट आइसकेको छैन । प्रा’रम्भिक रि’पोर्टमा ब-लात्कार भएको पुष्टि भइसकेको छ । – ओ एस नेपाल
Prevह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु’होस्..
Nextपानी चलाउँदा किन यसरी चाउरिन्छ हात-खुट्टा ? यस्तो रहेछ कारण
पल शाहको हातमा देखिएन हत`कडी, पल शाहको ताजा भिडियो बाहिरियो
कोरोना संक्र’मित मनोज गजुरेलको अवस्था गम्भीर, आई’सियूमा राखेर उपचार हुँदै
दशैंको मुखमा सुन तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस् आजको सुनको मूल्य
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132824)